ဆောင်းပါး – Voice of Myanmar
ဆူးငှက် ၁၉၅၀ ဝန်းကျင်၊ မန္တလေး… သင်္ကြန်ပြီးကတည်းက အတွေ့စိပ်လာသော ဂီတပါရမီရှင်လူငယ်လေးတွေက အခုတစ်လော မနက်လင်းတာနှင့် အောင်ပင်လယ်ကွင်း ကန်လယ်မှာရှိသော ဘကြီးစိန်တိုက်မှာ စုမိနေကြသည်။ ယဉ်ပျံရွာ ထန်းတောက ပုစွန်ဆိတ်ခုန်နှင့် ကွက်ကြော်လည်း ပါနိုင်တာပေါ့။ ဓားတန်းကိုသန့်နှင့် ဝမ်းကွဲညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ဘကြီးစိန်က လူ့ဘ၀ လူ့လောကကို ဂျစ်ကန်ကန် အရွဲ့တိုက်နေချင်သူပီပီ၊ လူသူကင်းဝေးသည့် အောင်ပင်လယ်ကွင်း ကန်လယ်ရှိ ခြံကြီးထဲမှာ တစ်ထပ် အုတ်တိုက်လေးမှာပဲ ခပ်ပျော်ပျော်နေသည်။ သင်္ကြန်အပြီး မိုးဖြိုင်ဖြိုင် မကျခင် ပူပြင်းလှသော မန္တလေးနွေကို ခုခံဖို့က ဂီတပါရမီရှင် လူငယ်လေးတွေအဖို့ ပုစွန်ဆိတ်ခုန်နှင့် ဘကြီးစိန်ခြံက လိုက်ဖက်ညီသည် မဟုတ်ပါလား …။ ကွင်းပေါ်က လေက အပူကို ဖယ်ထုတ်သည်။ တပြန့်တပြော ကွင်းထဲမှာ ပျိုးခင်းနှင့် ရိုးပြတ်တွေ ရှိမည်၊ အိပ်တန်းပြန် ကျေးငှက်တွေရှိမည်။ လှည်းစာမထိုး၍ ကျီကျီအီသော လှည်းဝန်ရိုးသံရှိမည်။ ကျောင်းသား၏…
ဆူးငှက် ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မွေးဖွားလာသော အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်၊ အနှစ် ၂၀အရွယ် လူငယ်တွေက မန္တလေးအငြိမ့် အော်ပရာဆိုတာကို သိရှိခံစားဖူးကြမှာမဟုတ် …။ အရင်က မန္တလေးမှာ အငြိမ့်အဖွဲ့တွေ လေးဆယ် …၊ ငါးဆယ်ရှိနေရာက တဖြုတ်ဖြုတ်နှင့်ကြွေသွားလိုက်ကြတာ ဒီကနေ့ အငြိမ့် ၃ဖွဲ့သာ ကျန်တော့သည်အထိပင် …။ အငြိမ့်ဆိုသည်ကလည်း တစ်နေကုန်ခြစ်ခြစ်တောက် ပူထားသော ကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာ စင်ထိုးပြီး ဖျာခင်းကြည့်ရသည့် ကြည့်ချင်ပွဲမို့ ဒီကနေ့ လူငယ်တွေနှင့် မကိုက်လှ။ ၁၉၈၈ အကျော် ၁၉၉၀ ဒီဘက် လူထုဖျော်ဖြေပွဲတွေ ပြန်လည်ခေါင်းထောင် နာလံထူလာချိန်တွင် ဇာတ်၊ အငြိမ့်ကဲ့သို့သော ရိုးရာပွဲခင်းများကို အဆင့်မြင့်ဇာတ်ရုံကြီးတွေထဲ ချက်ချင်းမထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းကလည်း နောက်မျိုးဆက်နှင့် ကွာဟစေသော အချက်တစ်ချက်ဆိုတာ ငြင်းခုန်ဖွယ် မရှိချေ။ မည်သို့ဆိုစေ ကိုလိုနီခေတ်ဦးကတည်းက မန္တလေးတွင်ဖြစ်ထွန်းခဲ့သော အငြိမ့်သည် ၁၉၈၀ဝန်းကျင်တွင် “အော်ပရာ”များဖြင့် လူထုဆန္ဒ၊ လူထုအာသီသအပေါ်…
သွေး (စစ်ကိုင်း) မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် 19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ကျဆင်းလာပြီ ဆိုပေမယ့် လုံးဝစိတ်ချရတဲ့ အနေအထားထိ မရောက်သေးပါဘူး။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာလည်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အတောအတွင်းမှာပဲ ကူးစက်မှုတွေ ဆက်လက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်မျိုးကွဲတွေကလည်း တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ ခုခံနိုင်စမ်း လျော့နည်းသွားမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်မှုတွေလည်း ရှိနေဆဲပါ။ သိပ်မကြာသေးမီကပဲ BA.4 နဲ့ BA.5 လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုဗစ်မျိုးကွဲ နှစ်မျိုးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ခြေရာခံမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမျိုးကွဲတွေဟာ မူလ အိုမီခရွန်မျိုးကွဲထက်ပိုပြီး ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ယူဆနေသလို အမေရိကန်မှာ နောက်ထပ် ကိုဗစ်လှိုင်း တစ်လှိုင်း ထပ်ဖြစ်လာမလားလို့ ပူပန်နေကြပါတယ်။ BA.4 နဲ့ BA.5 ဟာ မူအိုမီခရွန် မျိုးကွဲ BA.1 လိုပဲ စတင်တွေ့ရှိရတဲ့…
ဆူးငှက် “ကြားမရှုပ်နဲ့ ငြိမ်ပေး … ငြိမ်ပေး ဝါးလခုပ်က စိန်ဌေး … စိန်ဌေး၊ လာသမျှ ထိပ်ဆုံး …. ထိပ်ဆုံး ဆရာက မိတ်ထုံး …. မိတ်ထုံး၊ အထင်းသားဗျ တူး …. တူး လကွင်းသမားက ဖိုးထူး …. ဖိုးထူး၊ ရှိန်ဖြိုးညီစွ အဝေးရှောင် …. အဝေးရှောင် စိန်အိုးစည်က ဌးမောင် …. ဌးမောင် ကိုပုကိုငယ် တးတစ်သွယ် …. ကိုကြွယ်လိုလည်း မူတတ်ပါရဲ့၊ ကိုသန့် ကိုဉာဏ် တစ်မျိုးကြံ … အဖိုးတန်အောင် ညွန့်တက်ပါရဲ့၊ ပိဋကတ်အောင် …. စာတစ်စောင် ဆရာမောင်လို … ကွန့်တတ်ပါရဲ့၊ ပာစရာအပေါင်း မာစရာကောင်း သြဘာသောင်းလို … ကလိတတ်ပါရဲ့၊ အလှကလေးမဒီ … ညရေးအမီ မအေးကြည်လို ….…
ဆူးငှက် တကယ်တော့ ထိုနေရာသည် အမရပူရကောင်းစားစဉ်အခါက သာသနာ့အောင်မြေကြီးဖြစ်ခဲ့၏။ တောင်ဘက် တံခွန်တိုင်ရပ်တွင် အမရပူရခေတ်က ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိသာသနာ ရောင်ဝါနေလိုထွန်းခဲ့သော ပြည်တိုက်၊ ပုဂံတိုက်၊ မဟာဘုံကျော်တိုက် အစရှိသည်ဖြင့် သာသနာ့မြေဧက တစ်ရာကျော်ဝယ် ဘုရား၊စတီ၊ ပုထိုး။ ဘုန်းကြီးကျာင်းတိုက်ကြီးများဖြင့် ကြေးစည်သံ၊ ဆည်းလည်းသံများနှင့်အတူ တရားစည်ကြီး ဟည်းဟည်းကျော် ညံခဲ့သောနေရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ တကယ့် သာသနာ့အောင်မြေပင်တည်း။ မြို့ဟောင်းဘူတာမှ မီးရထားလမ်းအတိုင်း တောင်ဘက်သို့အနည်းငယ်သွား၍ အရှေ့ဖက်သို့ ရှုမျှော်ကြည့်လိုက်လျှင် အုတ်တံတိုင်းမုခ်ပျက်အချို့သာ ကျန်တော့သော ကျောင်းတိုက်ဟောင်းကြီး(၂)တိုက်ကို တောင်မြောက်ယှဉ်လျှက် တွေ့ရပေမည်။ ထိုကျောင်းတိုက်ကြီးနှစ်တိုက်ကား အရပ်အခေါ်အားဖြင့် “တောင်မှန်ကျောင်း”၊ “မြောက်မှန်ကျောင်း”ဖြစ်သော်ငြား မူလအမည်က မဟာအဘယာရာမတိုက်နှင့် မဟာဝိဇိတာရာမတိုက် တို့ဖြစ်ကြောင်း သိသူနည်းလှပါသည်။ မဟာအဘယာရာမတိုက်တွင် ‘မဟာတုလွတ်ဘုံကျော်ကျောင်း’ကြီးရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ မဟာဝိဇိတာရာမ တိုက်တွင် ‘မဟာအောင်မြေဗိမာန်’ ကျောင်းရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ မဟာအဘယာရာမတိုက်မှာ မင်းတုန်းမင်းကြီး၏ ခမည်းတော်ဖြစ်သော ရွှေဘိုမင်း၏ မိဖုရားကြီးကောင်းမှုဖြစ်သည်။ ‘မဟာဝိဇိတာရာမတိုက်’သည်ကား နောင်အခါ မင်းတုန်းမင်းကြီး၏…
2 weeks ago2weeks ago Editor
ဆူးငှက် ဇေဋ္ဌစန်းမြိုင် ကြိုင်ထုံမွှေးသည် မုလေးလေဝှေ့ ချပ်ရိုးငုံညှာတံ မေထုန်နယ်ခေတ် ခါဝဿန်မှာ စာမေးစာပြန်ဝါတော်လှမ်းမို့ ရွှေသန်းရံခသီဟာဘုံပြင် လူမှူးရာနန်းရှင် . . . နတ်နှုန်းတမွတ်ညာထွတ်တင်ငယ် သုဓမ္မာခွင်လှူပွဲခံရှင့်လေး။ ။ လေကငြိမ်သည်။ တစ်ခါတစ်ခါမှသာ သွဲ့သွဲ့လေးသွေးသည်။ နဖူးဆံစလေးတစ်စက ကလျလေးသာ လှုပ်သည်။လေကအငြိမ် နေကအပူမို့ ကြွက်ကြွက်သာဆူ ပူပါဘိ၏။ တွင်းရေတွေခမ်း၊ ကန်ရေတွေခာက်ကုန်ကြပြီ။ သစ်ရွက်တို့ အစိမ်းဆုတ်၏။ ရှားစောင်း၊ ဆူးခြုံ၊ ကိုင်းပင်၊ မိုးနှံတို့ ပြိုင်းပြိုင်းထ လာကြသည်။ ပေတစ်ရာလမ်းမှာ ကားတစ်စီးတလေ အပြေးအလွှား ဖြတ်သွားလေတိုင်း ကတ္တရာစေးသံ တဗြန်းဗြန်းမည်၏။ ကိစ္စမရှိ။ ဤအပူမျိုး ၄ရက်၊ ၅ရက်၊ တစ်ပတ်မျှ ကြိတ်မှိတ်၊ ခါးစည်းခံပြီးသော် မြစ်ပြင်တွင် လှိုင်းကြက်ခွပ်ကလေးတွေ ခေါင်းထောင်ထလာကြသည်။ တောင်ဆီက မိုးမည်းမည်းတို့ ညို့တက်လာ၏။ မိုးရနံ့လေးတွေ ရှေ့ပြေးယူဆောင်လာသော လေကလေးက သုန်လာသည်။ ယပ်တဖျပ်ဖျပ်ခပ်ရင်း မိုးဆီမျှော်မိ၏။…
ဆူးငှက် မန္တလေးသည် ၁၈၈၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ၂၉ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလိပ်လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၈၈၇ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြူနီစီပယ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၁နှစ်အကြာမှ မန္တလေးမီးသတ်ဌာနကို ၁၈၉၈ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မန္တလေးမီးသတ်ဌာန သက်တမ်းကား ယခု ၂၀၂၂ခုနှစ်တွင် ၁၂၄နှစ် တင်းတင်းပြည့်လေပြီ။ မန္တလေးမီးသတ်ကို စတင်တည်ထောင်စဉ်က တာဝန်ခံဗိုလ်မှာ မစ္စတာဝီလကင်ဆင်ဖြစ်သည်။ မီးသတ်ဌာန တည်ထောင်ပြီး မစ္စတာဝီလကင်ဆင်က တာဝန်ခံဗိုလ်အဖြစ် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး မီးသတ်ဗိုလ် အဆက်ဆက်မှာ (၁) မစ္စတာ ဝီလကင်ဆင် (၂)မစ္စတာဒိုဇီ၊ (၃) မစ္စတာလစ်တယ်လ်၊ (၄) မစ္စတာဂင်းနစ်၊(၅) မစ္စတာနယူးလင်းတို့ဖြစ်ပြီး မြန်မာလူမျိုး မီးသတ်ဗိုလ်အဖြစ် ပထမဆုံးတာဝန်ယူခဲ့သူမှာ ဦးမောင်မောင်ဖြစ်သည်။ မန္တလေးမီးသတ်ဌာနကို တာဝန်ယူခဲ့ကြသည့် အင်္ဂလိပ်မီးသတ်ဗိုလ်များအနက် မစ္စတာနယူးလင်းမှာ မီးသတ်ပညာ အရည်အချင်းများနှင့် ထူးချွန်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးမြန်မာမီးသတ်ဗိုလ် ဦးမောင်မောင်သည် မစ္စတာနယူးလင်း လက်အောက်တွင် ၁၃နှစ်ကြာမျှ မီးသတ်ပညာများကို လက်ပွန်းတတီး…
ဆူးငှက် မန္တလေးမှာ စာ,နယ်,ဇင်းလုပ်ငန်းနဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးတွေ ရှေးကတည်းက ဖြစ်ထွန်းအားကောင်းခဲ့တာပါ။ လက်လှမ်းမီသလောက်ပြောရရင် (၁၈၇၄) ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ။ (၁၈၈၆) မန္တလေးတိုင်းသတင်းစာ။ (၁၈၈၇) မန္တလေးဟာရယ်သတင်းစာ။ (၁၈၉၉) အထက်ဗမာပြည်ဂေဇက်။ (၁၉၀၀) ဗမာ့တာရာသတင်းစာ။ (၁၉၀၇) ဘားမားခရစ်တစ်သတင်းစာ။ (၁၉၁၁) ရတနာပုံ မဂ္ဂဇင်း။ (၁၉၁၇) စီပီ မဂ္ဂဇင်း။ (၁၉၂၀) တိုင်းချစ်သတင်းစာ။ (၁၉၂၁) နေပြည်တော်ဂျာနယ်။ (၁၉၂၁) ဟုမ္မရူးသတင်းစာ။ (၁၉၂၇) မန္တလေးသူရိယ။ (၁၉၂၇)မြန်မာ့ဦးစွန်း။ (၁၉၄၀) ကြီးပွားရေးဂျာနယ်။ (၁၉၄၅) လူထုဂျာနယ်။ (၁၉၄၆) လူထုသတင်းစာ။ (၁၉၅၀) မန်းခေတ်သတင်းစာ။ (၁၉၅၀)မြန်မာ့လမ်းစဉ်။ (၁၉၅၀) ရွှေမန်းစာဆိုစာစောင်။ (၁၉၅၀)ရွှေမန်းအောင်စည်သတင်းစာ။ (၁၉၅၀) ဟစ်တိုင် သတင်းစာ။ (၁၉၆၀) ရွှေမန်းစည်တော်။ (၁၉၆၀)ရွှမန်းပြည်ကျော်။ (၁၉၆၅) မန္တလာစာစောင်။ (၁၉၆၆) မန္တလေးဂျာနယ်(တိမ်ကြားမင်းခေါင် ဦးစီး)စတာတွေဟာ မန္တလေးမြို့ထုတ် သတင်းစာ၊ စာစောင်၊…
ဆူးငှက် မန္တလေးမြို့ မြို့မတူရိယာအသင်း၏ နတ်နေကိုင်းများဖြစ်ပြီး ဂီတထီးချက်စောင့် နတ်သားကြီးများဟု တင်စားခံခဲ့ကြရသော ရှေးရှေးကဆရာကြီးများသည် သီချင်းရေးစပ်ခြင်း ဂီတအလုပ်သာမက အသင်းကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက် ဆုံးမစကားများကိုပင် သီချင်းများ၌ ထည့်သွင်းရေးစပ်ပေးခဲ့ကြသည်။ အသင်းသားများက သီချင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သူတို့ မှတ်မိရာ သင်္ကေတများနှင့် မှတ်သားလေ့ ရှိကြသည်။ ဥပမာ- အာစရိ (၁)၊(၂)ဟုခါ်လေ့ရှိသည့် သီချင်းများသည် ဆရာမြို့မငြိမ်းရးစပ်ခဲ့သော သီချင်းများဖြစ်သည်။ ထိုသီချင်းများက မေတ္တာပို့သီချင်းများဖြစ်ပါ၏။ မေတ္တာပို့ သီချင်းများတွင် “မင်းတို့ မြို့မအသင်းသားတွေ ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင် ပရိသတ်ကြီးကို ဘယ်လိုမေတ္တာပို့ရတယ်၊ ကိုယ့်ကိုကြည့်ရှုစောင်မ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ လိုလားချက်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့မထားနဲ့ လျစ်လျူတောင် မပြုရဘူး၊ ပရိသတ်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် မဖြစ်ရဘူး” ဆိုသည်များကို လမ်းညွှန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက လူသားအချင်းချင်း ဘယ်လိုဘယ်သို့ နေထိုင်ဆက်ဆံရမယ် ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း သီချင်းများတစ်ဆင့် သြဝါဒပေးထားသည်။ အသင်းအနေဖြင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန် သဘောမနောကောင်းပြီး အားလုံးအပေါ်မှာ…